Mpamatsy sy kiraro mpamatsy zaza - mpamokatra masinina sy kiraro China
Baby Baby Lambskin Sock Booties / baoty
Vita amin'ny hoditr'ondry aostraliana ihany, Cozy, matevina ary mateza. Tsara mba hitazomana ny tongotra kely mafana sy ahazoana aina, namboarina miaraka amina fehin-kibo nitazona ireo booty tamim-pahamendrehana teo amin'ireo tongotra kelikely ireo. ● Andininy faha-1: BS-003 ● Misokatra miaraka amina fonosana ba nataony ● Volo vita amin'ny fingotra maharitra ● Loko: loko mena, beige, mavokely, manga ary loko hafa. ● habe: tabilao habe
Ankizy / Ankizy hoditr'ondry / hoditr'osy Booties / baoty
Vita amin'ny hoditr'ondry aostralianina ihany, izay mampionona, mitaiza ary mafana Miorina amin'ny rantsan-tànana kely ny famafazana tabilao. Ny faladian-tongotra EVA tokana dia maivana sy malefaka. Tonga lafatra amin'ny fandihizana ao amin'ny valan-javaboary, fiakarana vato eny amoron-dranomasina na fihantonana fotsiny eo an-tanàna ● Andininy faha-1: BS-002 ● Manokatra sy mifatotra amina velcro ● Volo vita amin'ny fingotra maharitra ● EVA irery ● Loko: mainty, volontany, rameva, mavokely , volondavenona sy loko hafa. ● habe: tabilao habe
Booties / kiraro ho an'ny zaza feno volo miaraka amin'i Velcro
Vita amin'ny hoditr'ondry aostraliana ihany, Cozy, matevina ary mateza. Tsara mba hitazomana ny tongotra kely mafana sy ahazoana aina, namboarina tamin'ny velcro mba ho mora hitafy sy hitazona ny tongotra mangorakoraka. Lavorary mba hanafanana sy hamelomana ny tongotra kely sarobidy • Andininy faha: BS -001 • Manokatra sy mifatotra amina velcro • Volo vita amin'ny fingotra maharitra • Loko: mainty, volontany, rameva, mavokely, volondavenona ary loko hafa. • habe: tabilao habe
ankizy / ankizy manety mittens hoditr'ondry
Namboarina sy namboarina tamin'ny fomba kanto, Namboarina ny hoditr'ondry malefaka indrindra, miaraka amina volom-borona marefo sy marefo, thermosatic voajanahary noho izany ireo mittens ireo dia tonga lafatra mandavantaona. tonga lafatra amin'ny fampiasana toetrandro isan'andro sy mangatsiaka. ● Andininy laharana: KM-002 ● 100% Fanetezam-boaloboka tena izy ● Fanjairana tànana ● Loko: loko mifangaro ● Hamafana madio ● tabilao habe
Zaza mofomamy hoditry ny zanak'ondry / zaza
Namboarina sy namboarina tamin'ny fomba kanto, Namboarina ny hoditr'ondry malefaka indrindra, miaraka amina volom-borona marefo sy marefo, thermosatic voajanahary noho izany ireo mittens ireo dia tonga lafatra mandavantaona. tonga lafatra amin'ny fampiasana toetrandro isan'andro sy mangatsiaka. • Andininy laharana: KM-001 • hoditr'ondry tena izy 100% • Fehezana fehikibo lava hampifandraisana mite roa • Loko: loko mifangaro • Hamafa madio • tabilao habe